हस्तमैथुन गर्नुहुन्छ ? यो जान्न आवश्यक छ ?
एजेन्सी, हस्तमैथुनलाई लिएर मानिसहरुमा कयौं भ्रम हुन्छन्। कयौं मानिसहरु यसलाई गलत भन्छन् भने कोही यसलाई सही भन्छन्। तर विज्ञानलाई यसलाई गलत मान्दैन। हस्तमैथुन स्वास्थ्यकालागि राम्रो र सामान्य मानिन्छ। हस्तमैथुनसँग सम्बन्धित केही रोचक प्रसंग
होइन। हस्तमैथुनले मानिसलाई अन्धो वा पागल बनाउँदैन। हस्तमैथुन गर्दा तपाइँको आँखा मुनि कालो हुँदैन। न यसले शारीरिक विकासलाई रोक्छ। वास्तविकता के हो भने हस्तमैथुन गर्दा तपाइँको तनाव कम हुन्छ र मानिसलाई खुशी राख्ने हार्मोन इण्डारफिंस रिलीज हुन्छ। जसले तपाइँलाई आनन्द बनाउँछ। हस्तमैथुनले निन्द्रा लाग्छ र तपाइँका गोप्य अंग सक्रिय बनाउँछ।
युवतीहरु हस्तमैथुनको समयमा आफ्नो गुप्तांगमा केही घुसाउँछन्। यो सेक्स टोय पनि हुनसक्छ। यस्तो गर्नु त्यतिबेलासम्म सुरक्षित नै मानिन्छ, जतिबेलासम्म तपाइँलाई कुनै कष्ट हुँदैन।